सिताराम कट्टेल - विकिपिडिया
हाँस्य कलाकार तथा समाजसेवी
वि.सं २०४० आश्विन ४ गते
सोलुखुम्बु जिल्ला, नेचाबेतघारी
कलाकार, निर्देशक, सामाजसेवी, सरसफाइ दुत
हाँस्य टेलिशृङ्खला मेरी बास्सै निर्माण तथा निर्देशन, काभ्रे डाँडा गाउँमा भूकम्प प्रभावितका लागि धुर्मुस सुन्तली एकिकृत नमुना बस्ती निर्माण
सिताराम कट्टेल (Sitaram Kattel) नेपालका हाँस्य कलाकार हुन्। कट्टेल सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचाबेतघारी गाविसको वडा नं‍. ७ मा जन्मिएका हुन् । पछि बसाइँ सर्ने क्रममा झापा आई बसोबास गरेका सिताराम कट्टेललाई धुर्मुसको नामले चिनिन्छ। उनी मेरी बास्सै नामक टेलिशृंखलाबाट लोकप्रिय बनेका हुन्।
सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) सगरमाथा अञ्चलको सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचा बेतघारी गा.वि.स.मा जन्मिएका हुन्। बुवा बोगराज कट्टेल र आमा कमला कट्टेलको जेठो छोरोका रूपमा वि. सं. २०४० साल आश्विन ४ गते उनको जन्म भएको हो ।[स्रोत नखुलेको] उनी ८ वर्षको छँदै उनको परिवार झापा झरेको थियो । माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन सिताराम कट्टेलले झापाको गौरादहमा पुरा गरे । निम्न आयस्तर भएको परिवारमा जन्मिएका उनले आफ्नो बाल्यकालदेखि नै आर्थिक अभाव भोगे । कापी कलमको जोहो गर्नका लागि उनी कहिले हलो जोत्थे त कहिले अरुको स्केच चित्र बनाउथे । खेतबारीको काम, घाँस दाउरा र घरायसी काम गर्दै अध्ययनलाई अघि बढाएका उनी विद्यालयमा राम्रो विद्यार्थीमै गनिन्थे । अत्यन्तै सोझा तर तेजिला सितारामले एसएलसी प्रथम श्रेणीमा पास गरे । उच्च शिक्षाका लागि उनी बुवाले ऋण गरेर जुटाएको १७ सय रुपैँया गोजीमा राखेर काठमाण्डौँ छिरे । कोठा खोज्दा, सामान जुटाउँदा ३६ प्रतिशत ब्याजमा बुवाले ऋण खोजेर दिएको पैसा सकियो । त्यसपछि काठमाण्डौँमा आएर उनले चित्र बनाउनेदेखि भाँडा बेच्ने कामसम्म गरे । संघर्षले जम्मा गरेको पैसाले रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा भर्ना भए । साथीहरूलाई जोक र क्यारिकेचर गरेर हँसाएको भरमा थुप्रै छाक टारे । केही समयपछि उनलाई कलाकार बन्ने भूत चढ्यो । हाँस्यकलाकार खेम शर्मासँगै बस्न थाले । खेम शर्मासँगै हिँड्न थालेपछि चिनजान बढ्यो । तर, गतिलो अवसर पाएनन् । काठमाण्डौँदेखि हार मानेर झापा फर्किएका सिताराम फेरि संघर्षसँग जुध्नका लागि राजधानी आए ।
पेशागत जीवनी[सम्पादन गर्ने]
टेलिशृंखला 'हिजो आजका कुरा'मा छोटो संवाद बोल्ने मौका पाए। औपचारिक रूपमा भने हाँस्यकलाकार जितु नेपालले उनलाई कलाकारितामा प्रवेश गराए । गीताञ्जली टेलिफिल्ममा अभिनय गर्ने मौका जुरेसँगै उनले केदार घिमीरे (माग्ने बुढा) लाई भेटे । धुर्मुस र माग्ने बुढाको जोडी जम्यो । गीताञ्जलीमा अभिनय गदागर्दै उनले दीपक राज गिरीसँगको चिनजानका कारण तितो सत्यको १४ भागसम्म अभिनय गरे । पछि केदार घिमीरेसँग मिलेर मेरी बास्सै हाँस्य टेलिश्रृंखला बनाए । मेरी बास्सैमा सितारामले अभिनय गरेको धुर्मुस पात्रले चर्चा र लोकप्रीयता कमायो । सिताराम कट्टेल एउटै टेलिश्रंखलामा सबैभन्दा धेरै भूमिकामा देखिएका कलाकार हुन् । उनी खड्काजी, मुस्कान पासा, केपी ओलीको नक्कली रुप, खडानन्दलगायत दुई दर्जन भूमीकामा देखिएका छन् । मेरी बास्सै निर्माणकै क्रममा उनले धुर्मुसको जोडीको रूपमा देखिएकी कुञ्जना घिमिरे(सुन्तली)सँग विवाह गरे । अहिले उनीहरूको एक छोरी सुबिहानी छिन् । यस्तै, चलचित्र निर्माण र अभिनयमा पनि सिताराम कट्टेल सहभागी छन् । छ एकान छ, वडा नम्बर ६ लगायतमा हिट चलचित्रमा पनि सिताराम कट्टेलले अभिनय गर्नुका साथै लगानी पनि गरेका थिए । विक्रम सम्बत् २०७२ वैशाख १२ को गोरखा भूकम्प पश्चात् धुर्मुस सुन्तलीको जोडी सामाजिक काममा पनि सक्रिय छन् । भूकम्प पश्चात् यो जोडीको सक्रियतामा काभ्रेको डाँडा गाउँमा एकीकृत बस्ती बनाइएको छ । धुर्मु सुन्तली एकीकृत नमुना बस्ती नाम दिइएको उक्त बस्तीले धेरैबाट प्रशंसा पाएको छ । यस्तै, भूकम्प प्रभावितलाई न्यानो कपडा बाँड्नुका साथै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित मुसहर बस्तीमा राहत बाँडे । यी सामाजिक कामलाई अझै सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउन उनीहरूले वि.सं. २०७२ सालमा धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन स्थापना गरेका छन् ।
छ एकान छ (सन् २०१३)
नाइँ न भन्नु ल २ (सन् २०१४)
वडा नं ६ (सन् २०१५)
‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन’लाई मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार - वि. सं. २०७६
भैरव स्मृति पुरस्कार - वि. सं. २०७६
भुकम्प पुनर्निर्माणको सद्भावना दूत
↑ "यस्तो बन्यो धुर्मुस-सुन्तलीको मुसहर बस्ती", दैनिक नेपाल, २०७३ चैत २३, अन्तिम पहुँच २०७३ चैत २३।
↑ "सिताराम कटटेल र कुञ्जना घिमिरेलाई उत्कृष्ट नागरिक सम्मान", हिमशिखर टेलिभिजन, बैशाख ३, २०७४, अन्तिम पहुँच बैशाख ३, २०७४।
↑ ‘धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसन’ लाई मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार-सेतोपाटी डटकम
↑ धुर्मुस–सुन्तलीलाई भैरव स्मृति पुरस्कार-राजधानीडेली डटकम
‘धुर्मुस’को समाजसेवा, चौतर्फी प्रशंसा-अनलाइन खबरडटकम
धुर्मुस–सुन्तली निर्देशित छोटो फिल्म ‘हरियो बिल्ला’ को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)-सेतोपाटी डटकम
सुमन संग-धुर्मुस सुन्तली
हरिवंश आचार्य • मदन कृष्ण श्रेष्ठ • सन्तोष पन्त • मनोज गजुरेल • सिताराम कट्टेल • केदार घिमीरे • कुञ्जना घिमिरे • रामचन्द्र अधिकारी ‎
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=सिताराम_कट्टेल&oldid=1025330" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १८:१८, ३० जुन २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।